အရိုးမား မြန်မာခရစ်ယာန်စာပေ – Aroma Myanmar Christian Articles
ကယ်တင်ခြင်းကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဟု လမ်းမကြီးများအပေါ်တွင် သွားလာနေကြသော လူများအား မေးကြည့်လျှင် အဖြေအမျိုးမျိုး ရမည်ဟုထင်ပါသည်။ “အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် နေထိုင်သက်ရှင်ရမယ်” “ကောင်းမှုကုသိုလ်များများ လုပ်ရမယ်” “မိမိရဲ့ အသက်တာမှာ ဆိုးမှုထက် ကောင်းမှု များများပိုလုပ်ရမယ်” စသဖြင့် ….. တကယ်တော့… နိဗ္ဗန်ကိုရောက်ဖို့ လိုတဲ့ ကယ်တင်ခြင်းဆိုဒါ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်။ ဘုရားပေးတဲ့ လုပ်ခ၊ သို့မဟုတ် လုပ်အားခ မဟုတ်ပါဘူး။…
လွတ်ပြီ၊ ကျွတ်ပြီ။ FREE! FREE!
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်၊ ဂျပန်စစ်တပ်သည် တရုတ်ပြည်ရှိမြို့များကို တခုပြီးတခု သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာ၊ မဟာမိတ်ဘက်မှလူများသည် S. S. Nankin သင်္ဘောဖြင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပါသည်။ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲရောက်သောအခါ၊ ဂျပန်လေတပ်မှယင်းသင်္ဘောကိုဖမ်းပြီး၊ ဂျပန်ပြည် Fukushima စစ်သုံ့ပန်းစခန်းသို့ ခေါ်သွားကာ ဂျပန်အကျဉ်းသားဘဝသို့ရောက်သွားကြပါသည်။ စာတန်သည်၊ ဧဒင်ဥယာဉ်၌ ဘုရားစကားကိုနားမထောင်သည့် လူအာဒံကိုဖမ်းဆီးသောကြောင့်၊ လူသားမျိုးနွယ်စုအားလုံး၊ နားမထောင်အချုပ်ထဲရောက်ရှိသွားကြပါသည်။ ထိုအကျဉ်းသားများတွင်၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ လုပ်ငန်းပေါင်းစုံ၊ ရာထူးအဆင့်ပေါင်းစုံ၊ ဘာသာတရားပေါင်းစုံ၊ အသက်အရွယ်ပေါင်းစုံ၊ ပညာအဆင့်အတန်းပေါင်းစုံ၊…
By Rev. Dr. Lam Cin Thang (Principal - All Nations Theological Seminary) တကမ္ဘာလုံးကိုသိမ်းပိုက်ဘို့ရည်ရွယ်သည့် နာမည်အကျော်ကြားဆုံးစစ် ဘုရင် လေးပါး (ဟန်နီဘာလ်၊ နပိုလီယန်၊ နှင့် ဟစ်တလာ) တွင်ပါဝင်သူ မဟာအာလက်ဇန်းဒါးဘုရင် (356-323 ဘီစီ) သည် သူ၏ အသက် ၃၀ ရှိသည့် အချိန်တွင်…
29 Mar 2013 12 Sep 2018
ကျွန်တော်တို့ Dear Abby ပြောသော ရင်နင့်ဖွယ်ကောင်းသည့် ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ကြားဖူးချင် ကြားဖူးကြမည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော မိသားစုမှ သားအဖနှစ်ယောက် အကြောင်းဖြစ်သည်။ သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အစဉ်အလာ ကဲ့သို့ ကျင့်သုံးသော ဓလေ့ တစ်ခုရှိသည်။ သားသမီး တစ်ယောက်ယောက် ဘွဲ့ယူလျှင် မိဘများက ကားအသစ်တစ်စီး ဝယ်ပေးခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုလေ့ ရှိသည်။ မကြာခင် ဘွဲ့ယူမည့် ဘီလ်…
13 Mar 2013 22 Aug 2018
မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်က သူကြည့်ဖူးသော Happiness ဟု အမည်ရသည့် documentary ရုပ်ရှင် ကားတစ်ခုအကြောင်းပြောပြဖူးသည်။ ထို ရုပ်ရှင်ထဲ၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပျော်ရွှင်ဆုံး တိုင်းပြည် (သို့) လူမျိုးသည် ဒိန်းမတ်လူနိုင်ငံ နှင့် လူမျိူးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည် ဟု ဆိုသည်။ မိတ်ဆွေ၏ ပြောပြချက် အရ ဒိန်းမတ် လူမျိုးများသည် အသိုင်းနှင့် အဝိုင်းနှင့်…
ခရစ်ယာန်အသက်တာ - ဗီဒီယို
15 Sep 2012 27 Sep 2018
ကနေ့ အသင်းတော် တွေမှာ “ယုံကြည်သူ များရဲ့ ထာဝရ ကလေး ဘဝ” လို့ ခေါ်ဆိုနေရတဲ့ အဖြစ်မျိုး တွေ ကြုံနေရ ပါတယ်။ကျွန်တော် တို့အသင်းတော် တွေမှာ အသင်းသားတွေ အများ အပြားရှိနေတာ ကတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ နှစ်ရှည်လများ အသင်းတော်မှာ ဒေသနာတွေကို ကြားနေခဲ့ကြပေမယ့် ဘာမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲမလာ ခဲ့ကြဘူး။…
ဘုရားသခင်ထံ အကြွင်းမဲ့ ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း
3 May 20122Oct 2018
အမည်မသိစာရေးသူ တစ်ယောက်က သည်လိုရေးသားဖူးသည်။ “ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းသည် လူသားတို့ အနေနှင့် ဘုရားသခင်အတွက် လုပ်ပေးနိုင်သည့် အရာများတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် တန်ဖိုး အရှိဆုံးသော အရာဖြစ်သည်”။ အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံခြင်း လို့ ဆိုတဲ့အခါ မိတ်ဆွေ ဘယ်လို နားလည်ပါသလည်း? ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြွင်းမဲ့ အပ်နှံခြင်း ဆိုဒါ ကိုယ့်ထက် တန်ခိုးအာဏာ…
6. CHRISTIAN RELATED ARTICLES
24 Feb 2012 12 Sep 2018
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်သော ဒါဝင်၏ နှစ် ၂၀၀ ပြည့်မွေးနေ့ကို ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းများက သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆိုကျင်းပ နေကြသည်။ ဒါဝင်၏ နှစ် ၂၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေသော ”မျိူးနွယ်တို့၏ မူလအစ” (On the Origin of Species) စာအုပ်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်တို့၌ ပလူပျံအောင် ရောက်ရှိလာသည်။ ဒါဝင်ကို ထိပ်တန်း…
27 Jan 2012 12 Sep 2018
၃။ တောင်ပေါ်တရားတော်၌ ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ ၁။ ကျင့်ကြံရမည့်နည်းလမ်းများဖော်ပြခြင်း ဘုရားသခင်သည် လူကို ဖန်ဆင်းသောအခါ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့် အညီ ဖန်ဆင်းထားပါသည်။ ဤနေရာ၌ ဆိုလိုသည်မှာ မြင်နိုင်သော ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖော်ပြလိုခြင်းမဟုတ်၊ “စိတ်ဝိညာဉ်” ကိုဖော်ပြ လိုခြင်းဖြစ် ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာဦးမှစပြီး လူမျိုးတစ်မျိုးစီ လိုက်နာမည့် စည်းကမ်းများ အသီးသီးထားလေ့ရှိပါသည်။ သခင်ယေရှု မကြွလာမှီ အချိန်မှစပြီး၊…
26 Jan 2012 12 Sep 2018
၁။ ခြုံငုံလေ့လာခြင်း။ ၆၆ အုပ်ရှိသော “သမ္မာကျမ်းစာ” အားလုံး၏ အခြေခံ ပင်ရင်းသည် သခင်ယေရှုသာလျှင်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းမှ ဦးတည်ရေးသားသည်မှာ ယေရှုဖြစ်ပြီး၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်း ပေါ်ပေါက်ခြင်း သည်လည်း ယေရှုကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ခစ်ယာန်ဘာသာနှင့် သခင်ယေရှု၏ အလိုတော်သိရှိနိုင်ရန် သမ္မာကျမ်းစာမှ သခင်ယေရှု၏ သွန်သင်သော အချက်များ ပြည့်စုံစွာသိရှိဖို့ရန် အရင်ဦးဆုံးလိုအပ်ပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှ သခင်ယေရှု၏ မိန့်မှာချက်များကို…
ကျွန်ုပ်တို့သည် အထက်ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း ဆိုသည် စကားကို မကြာခဏ ဆိုသလို ကြားဖူးကြသည်။ အထက်ဖက်ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း ဆိုသည့် စကားသည် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ကို အတိအကျ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်မည်နည်း? အထက်ကို မျှော်ကြည့်ခြင်း သည် တိုးတက်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း ၏ သဏ္ဍန်ကို ဆောင်ပါသည်။ သင်၏ ဘဝ၊ အခွင့်အလမ်း နှင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ သည်…
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည် သူများ ဖြစ်ကြပေမဲ့ တခါတလေ ဘဝမှာ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်း စရာများကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ယုံကြည်သူ၊ ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု ကို ရရှိပြီးတာနှင့် တခါထဲ လောကဓံ ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ကနေ လွတ်ကင်း သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချမှု ရပြီးပြီ ဆိုရင် ဘဝမှာ ခက်ခဲခြင်း လုံးဝ…
13 Dec 2018 18 Dec 2018
သင်းအုပ်ဆရာ တဦးသည် နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်း၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ယုံကြည်သူ အသစ်တယောက်အား ဤ သို့ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ သူ့၏လက်ကို နေရောင် အောက်တွင်လှုပ်ရှားသောအခါ၊ လက်၏ အရိပ်သည် သဲသောင်ပြင်တွင် ပေါ်လာသည်။ ယုံကြည်သူအသစ် အား "သဲသောင်ပြင်မှာ အရိပ်ကိုမြင်တယ်မဟုတ်လား? ဒါက ငါ့လက်ရဲ့အရိပ် မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာ ကတော့ လက်အစစ်ပါ (လက်ကိုပြ)။ ခရစ်တော် ကိုယုံကြည် လက်ခံသောနေ့ဟာ…
သူတပါးတို့ သည် ယေရှုခရစ်အဘို့အလိုငှါ ငါတို့၌ ကောင်းသောအရာ ရှိသမျှတို့ကို ဝန်ခံ (သက်သေခံ/ဝေငှ) မည်အကြောင်း ဆုတောင်း ပဌနာပြု၏။ (ဖိ ၁း၆-ခ) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် ကင်ဆာရောဂါ ကို အမြစ်ပြတ်ကုသနိုင်သော နည်းကို သိလျက်နှင့် မည်သူ့ကိုမျှ အသိမပေး မကုသခဲ့၊ မဝေမျှခဲ့ လျှင် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူ တစ်ယောက်နှင့် အဆင့်တူဖြစ်မည်။ အကယ်၍…
မျက်မှောက်တော်၌ ဘုရားသခင်နှင့် အချိန်ယူခြင်း
"မင်းရဲ့ ဆုတောင်းခြင်း အသက်တာ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ" ဟု ဖခင်က သားကို မေးသည်။ ထက်မြက်၍ ဘုရားကျောင်း မှန်မှန်တက်သော ၁၄ နှစ် အရွယ် သားက ပခုံးတွန့်ပြရင်း “ကျွန်တော်က အဲဒီလောက် ဆုတောင်းတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး” ဟု ဖြေသည်။” “ဘာဖြစ်လို့လဲ” “ကျွန်တော် ဘာမှ မလိုအပ်လို့လေ” ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေး၏ ရိုးသားသောအဖြေက "လိုအပ်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ဆုမတောင်းကြောင်း” ကျွန်ုပ်တို့ နှုတ်မှ…
ကျွန်တော် သည် ငယ်ရွယ်စဥ်ကလေးဘဝတွင် မိဘများကို တန်ဖိုးကြီးကြီးမားမား မရှိလှသော လက်ဆောင် ပစ္စည်းများကို ပေးတတ်လေ့ရှိသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာသောအခါ ကျွန်တော် ပေးခဲ့ဖူးသော ထိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများသည် မည်သို့မျှ အသုံးမဝင်သော ပစ္စည်းများ ဖြစ်နေသည်ကို ဆင်ခြင်မိသည်။ သို့သော် ထိုပစ္စည်း လက်ဆောင်များကို ပေးလိုက်သည့် အချိန်တိုင်း ကျွန်တော်၏မိဘများသည် အလွန်ဝမ်းသာ ကြသည်ကို ယနေ့တိုင်အောင် မမေ့နိုင်သေးပါ။ တရက်…
ယေရှုဟာဘယ်သူလဲ? ဤမေးခွန်းကို မေးကြည့်လျှင် - မော်မွန်ဘာသာဝင်များက Elohim ၏ သားဦး ဖြစ်သည်ဟု အဖြေပေးမည်။ ဘုရားသခင်နှင့် မေရီတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာမှ ဖွါးမြင်သော သားဦးဖြစ်သည်ဟု မော်မွန်ဘာသာဝင်များက ယုံကြည်သည်။ မူဆလင်ဘာသာဝင်များက အာဗြဟံ၊ မောရှေ နှင့် ဟေရှာယ ကဲ့သို့သော ပရောဖက်ကြီးတပါးဟု ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ယေရှု နောက် နှစ်ပါင်း ၅၀၀…
သမ္မာကျမ်းစာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (ယောရှု)
သမ္မာကျမ်းစာအုပ်တွင် ယောရှု ၏ နာမည်ကို ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁ရး၉ တွင် ပထမ ဆုံးအနေနှင့် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဟေဗြဲ ဘာသာစကား အရ ယောရှု ဟူသော နာမည်၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်မှာ “ကိုယ်တော် သည် ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည် (The Lord is Salvation)” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဂျုးလူမျိုးများအတွက် ယနေ့…
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသော ဘဝ၏ နေ့ရက်များစွာ ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး တစ်ရက်၊ ကျွန်ုပ်၏ လောကခရီးစဉ် ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရသည်။ ပထမဦးဆုံး သတိပြုမိသော အရာကား တရားရုံး တစ်ခု၏ အပြင်ဖက် နားနေခန်းတွင် မိမိ၏ အလှည့် ကိုစောင့်နေသော သူ တစ်ဦးအဖြစ် မိမိကိုယ်မိမိ မြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းတည်း… ရုတ်တရက် တံခါးပွင့်လာပြီး တစုံတယောက်က ဝင်လာရန်ကျွန်ုပ်ကို ခေါ်သည်။ တရားရုံးထဲ…
မေတ္တာစိတ်သည် လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် ကင်းစေလော့။ ဆိုးညစ်သော အမှုကို စက်ဆုပ် ရွံရှာကြလော့။ ကောင်းမွန်သော အမှု၌ မှီဝဲဆည်းကပ်ကြလော့။ ညီအစ်ကိုချစ်ခြင်း အရာမှာ၊ ပကတိပေါက်ဘော်ကဲ့သို့ တယောက်ကို တယောက် စုံမက်ကြလော့။ ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာ၊ သူတပါးကို ကိုယ်ထက်ချီးမြှောက်ကြလော့။ (ရောမ ၁၂း ၉-၁၀) သင်၏အသက်တာ ထာဝရပြောင်းလဲခြင်း ရရှိလိုပါသလား…သင်၏ဘဝကို စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းတရားဖြင့် တန်ဆာဆင်ပါ။ မည်သည့် အရာကမျှ မပြောင်းလဲစေနိုင်သော…
သမ္မာကျမ်းစာမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ (ဟေရုဒ်မင်းကြီး)
ရှင်မဿဲ ၂း၁ တွင် ဟေရုဒ်မင်းကြီး အကြောင်းကို ဦးစွာဖော်ြပထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူငယ်တော် ယေရှုကို သတ်ရန် ကျိုးစားကြံစည်သည့် သူဖြစ်ပြီး ထိုအချိန်မတိုင်ခင်တွင် သူ၏ ဇနီးသည်၊ သားအရင်း နှစ်ယောက်နှင့် ယောက္ခမ ဖြစ်သူတို့ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူငယ်တော်ယေရှု ကို၎င်း မိသားစု၀င်များကို ၎င်း လုပ်ကြံရန် ကျိုးစား အားထုတ်ရခြင်း၏ အဓိကတွန်းအား (motivation)…
သခင်ယေရှုကိုငြင်းပယ်သူ လူ ၂ ယောက်အကြောင်း
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်သူ ဖြစ်ကြသော်လည်း ဘဝအဆုံးသတ် မတူသော လူ ၂ ယောက်ရှိသည်။ တမန်တော် ပေတရုနှင့် ယုဒရှာကရုတ် တို့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ ၂ ယောက် ၏ တူညီသော အချက်များမှာ သခင်ယေရှု၏ နောက်လိုက် တမန်တော်များ ဖြစ်ခြင်း နှင့် သခင် ယေရှုကို ငြင်းပယ်ဖူးသူများ ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ သို့သော်…
အချိန်ကား ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ အရိုးခိုက်အောင် အေးသည့် ခရစ္စမတ် အကြိုည၊ တောင်မြောက် ပြည်တွင်းစစ် ကြောင့် ကိုးရီးယား တစ်နိုင်ငံလုံး စစ်ရှောင် ဒုက္ခသည် များအဖြစ် ပြေးလွှား ပုန်းခို နေရသည့် အချိန်။ ငယ်ရွယ် နုပျိုဟန် ရှိသော နေ့စေ့ လစေ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင် တစ်ယောက်၊ ရုတ်တရက် ဗိုက်နာ သောကြောင့်…
ကျွန်တော် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝတုံးက မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တစ်ခုမှာပါရှိတဲ့ ရုပ်ပြောင်ကာတွန်းတစ်ခုကို လွန်စွာ သဘောကျခဲ့ဘူးတယ်။ ကာတွန်းထဲမှာ သေခါနီး အဖိုးအိုတစ်ဦးက သား၊ သမီး မြေး၊ မြစ်များကို “အဖိုးလည်း ရုပ်ရှင်တွေထဲလို မသေခင် စကားတွေအများကြီးမှာထားခဲ့ချင်တယ်” ဟု မျက်နှာ ပြောင်ပြောင် ပြောနေပုံကို ဆွဲထားရာ သေခါနီး စကားပြောဒါတောင် ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသားမင်းသမီးတွေလို လုပ်ပြချင်ရသေးတယ်ဟု စဉ်းစားမိပြီး ရယ်မောခဲ့ရတယ်။…
ကျွန်ုပ်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၄ နှစ် ခန့် ကျမ်းစာကျောင်းတက်နေသည့် အချိန်တွင် တော်မီ ကိုသိကြွမ်းခွင့် ရခဲ့သည်။ သူသည် ထိုအချိန်တွင် ဘိုသီဘတ်သီ ဆံပင်ကို ဂုတ်အထိရှည်အောင် ထားပြီး လမ်းမပေါ်တွင် ဦးတည်ရာမဲ့ သွားလာတတ်သည့် လမ်းသူရဲ တစ်ယောက်နှင့် တူသည်။ ကျမ်းစာကျောင်းသားတစ်ယောက် ဟုထင်မြင်စရာပုံစံ မရှိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက် တော်မီ ကကျွန်ုပ်ကိုမေးသည်… “တရက်တချိန်ကျရင်…ငါ…
13 Aug 2018 21 Aug 2018
သမီးဖြစ်သူ၏ နေထိုင် မကောင်းဖြစ်နေသော ဖခင်အတွက် လာရောက်ဆုတောင်း ပေးရန် တောင်းဆိုမှုဖြင့် သင်းအုပ်ဆရာ တစ်ယောက် ဖခင်ကြီးတစ်ယောက် ၏ အိမ်သို့ရောက်ရှိလာသည်။ အိပ်ခန်းအတွင်း ရောက်သော အခါ ဖခင်ကြီးကို ကုတင် ထက်တွင် ခေါင်းအုံး နှစ်ခုဆင့်ကာ လှဲလျောင်းလျှက် တွေ့ရသည်။ ကုတင်ဖက်ကို လှည့်၍ ထားသော ကုလားထိုင် တစ်လုံးကိုလည်း အဆင်သင့် တွေ့ရသည်။ သင်းအုပ်ဆရာ…
“ယေရှုကလည်း၊ ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏။ ငါ့ကို ယုံကြည် သောသူသည် သေလွန်သော်လည်း ရှင်လိမ့်မည်။” (ယော ၁၁း၂၅) နာမည်ကျော် သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်း အကြောင်းကို လူတိုင်း သိကြသည်။ ဂျူးလူမျိုး မိဘ နှစ်ပါးမှ ၁၈၇၉ မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဂျာမဏီနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားသော ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ရူပဗေဒ ပညာရှင် ကြီး…
အဖေနှင့်အမေ က အိမ်မှ ထွက်မသွားရန် အတန်တန် တားသည့် ကြားထဲမှပင် ကျွန်တော်သည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သောနေ့တွင် နှစ်အတန်ကြာဆုဆောင်းထားသော ငွေအနည်းငယ်နှင့် ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပိုးပြီး ကျွန်တော့်၏ ဗောက်စ်ဗော်ဂွန် လိပ်ခုံး ကားကလေး ဖြင့် လောကကြီးကို စူးဆန်းလေ့လာရန် ထွက်လာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရုန်းကန် လုပ်ကိုင် ၍ ရရာအလုပ် လုပ်ပြီး ဘ၀ကို…
ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းသံကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးသည်ဟု မိတ်ဆွေယုံကြည်ပါသလား? မယုံမရှိပါနှင့် မိတ်ဆွေ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်းသမျှအားလုံး ဘုရားသခင် အဖြေပေးပါတယ်။ ဆုတောင်းခြင်း သည် တနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောခြင်း၊ ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင် ပြန်ပြောသည့် အရာများကို နားထောင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်ထံ မေးခွန်းထုတ်၍ မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သော ခရစ်ယာန် ယုံကြည်သူ တို့က ဘုရားသခင်ကို မေးခွန်းထုတ်၍ မေးမြန်းခြင်း ကို…
4. SALVATION AND EVANGELICAL
19 Nov 2014 12 Sep 2018
တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေကာင္းကင္ ႀကိဳးလမ္းေလွ်ာက္သမား တစ္ေယာက္သည္ Niagara ေရတံခြန္၏ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ ၿခမ္းဖက္မွ တစ္ဖက္ ကေနဒါႏိုင္ငံဖက္သို႔ သံႀကိဳးရွည္ တစ္ေခ်ာင္းသြယ္ၿပီး တဟုန္ဟုန္းျမည္ဟီးေသာ ေရတံခြန္ အေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ ျပကာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာ ပရိတ္သတ္၏ ခ်ီးက်ဴးေထာမနာ ျပဳျခင္းကို ခံယူခဲ့သည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဟိုဖက္ဒီကမ္း ဒီဖက္ကမ္း လမ္းေလွ်ာက္ျပ ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္…
7 Oct 2014 12 Sep 2018
Saya Saw Min Lwin
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးဇူးရှင် ဆရာယုဒသန်